काठमाडौंका मिठाई पसलमा अनुगमन, भेटिए मिति नाघेका मिठाई ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंका मिठाई पसलमा अनुगमन, भेटिए मिति नाघेका मिठाई !
काठमाडौंः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोलीले काठमाडौंका तीन वटा मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी र विभागकी महानिर्देशक मतिना बैद्य नेतृत्वको संयुक्त टोलीले तीन मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस यि हुन् ७ प्रदेशका उत्कृष्ट ७ कृषक (नामावलीसहित)
अनुगमनपछि कृषि राज्यमन्त्री चौधरीले व्यवस्थापकीय कम्जोरी पाइएको बताइन् । उपभोक्तालाई गुणस्तरिय खाना खुवाउने व्यवसायीहरुको पनि कर्तव्य रहेको भन्दै अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताइन् । उनले मिठाई पसल मात्र नभई सबै खाद्य पदार्थमा अनुगमन र नियमन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले उपभोक्ता र व्यवशायीका लागि अनुज्ञा पत्र लिएर काम गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिइन् ।
याे पनि पढ्नुस जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलार्इ रेडकार्ड दिन मन्त्री खनालकाे निर्देशन
राज्यमन्त्री चौधरीले एक हप्ता भित्र सुधार गर्न सबै पसल सञ्चालकलाई निर्देशन दिइन् । विभागकी महानिर्देशक बैद्यले सरसफाइ र गुणास्तरियता कायम गर्न नसकेको भन्दै विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताइन् । टोलीले परीक्षणका लागि १४ प्रकारका खाद्य पदार्थ लिएको जनाएको छ ।
ट्याग्स: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, मिठाई पसल